မြေကြီးတပြင်တွင်အပေါ့ပါးဆုံးလျှပ်စစ်စကိတ်စီး - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ငါတို့သည်လည်းထင်-အကြောင်းကိုတကွင်းဆက် drive ကိုအတွက်သက်ဆိုင်တင်းမာမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးကတော့ hoverboard ပေမယ့်တစ်ခုတည်းကိုသာဤအ လျှပ်စစ် hoverboards သင့်လျော်သောအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရှိသည်သောသုံးစွဲဖို့လုံခြုံဖြစ်ကြသည် - ဤအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအားလုံးအမြင့်ဆုံး 10 အကောင်းဆုံး hoverboards ပါဝင်သည်။ သူတို့ကမည်သို့ပင်ဆိုစေဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ခြင်းနေကြသည်။ သငျသညျကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကစက်ဘီးနင်းနှင့်အနိမ့်အကူအညီများ mode မှာအသုံးပြုနိုင်ပေမည်။ mini ကို Harley, ရဲဆိုင်ကယ်နှင့်သင်္ဘောရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဤတိုတောင်းသောခရီးစဉ်များကိုင်တွယ်ရန်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်အဲဒီမှာခံစားရတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး, သင်ပိုကောင်းအမှန်တကယ်အရေးပါအဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်ယူခဲ့ရသည်။ တစ်လှိုင်းစမ်းသပ်မှု, ပယ်-လမ်းဖုန်မှဦးခေါင်းမှထွက်ဘို့အိုင်နားရန်သင့်အားရိုးရိုးခရီးပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ရပ်ကွက်အတွင်းန်းကျင်အားစိုက်ရသော-ကြမ်းပြင်အလျင်ပုံစံနှင့်အတူထား, တစ်ဦးရှိပါတယ် Koowheel လျှပ်စစ်စကိတ်စီး သင်တို့ကိုအကုန်အ, သင်၏စတိုင်မှလိုက်ဖက်။ အတော်များများကအနာဂတ်သဘောတရားများကိုပညာရှိဖြစ်လွန်း farfetched ပေါ်လာသို့သော်ဤလျှပ်စစ်စကိတ်စီးအမှန်တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်နှင့်ပျော်စရာများနှင့်အသုံးဝင်သောနှစ်ဦးစလုံးဖွစျဖို့ထွက်လှည့်။
ဒါဟာတွေ့ကြုံခံစားရန်, အလွန်အေးမြသောစနစ်တကျ-ဆောက်လုပ်ထားနှင့်ပျော်စရာတွေ့ကြုံခံစားရန်, အလွန်အေးမြသောထိရောက်စွာ-built နှင့်ပျော်စရာပဲ! သင်သည်သင်၏မြို့အတွက်တစ်ဦးချင်းစီထောင့်ကစီးနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ရှေ့ဆက်သွားရသို့မဟုတ် reverse နိုင်ကြသည်ဒါကြောင့်သင်ကတစ်ခုတည်းကိုသာရှေ့ကိုဒါမှမဟုတ်နောက်ကျောအမှီရန်လိုအပ်မည်အကြောင်းတည်းငြိမ်ဝပ်ကြော်ငြာနှင့်အတူထောင့်အားဖွငျ့ရှေ့မြောနိုင်ပါတယ်။ ဖိုအဖြစ်အများအပြား features တွေရှိပါတယ်:
မြင့်မားသောအားဖွင့ ်. နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံသောအတိုခရီးစဉ် tool ကို 1 ။
2. ပေါ့ပါးကျစ်လစ်သိပ်သည်း, ခရီးဆောင်, ရိုးရှင်းတဲ့။
စျေးပေါတဲ့ရသေးတာရှည်ခံ3။
အဆိုပါ Powerboard ကိုယ်ပိုင်ထပ်ဆင့်တင်ခြင်းစကူတာလူတိုင်းအဘို့ဖြစ်၏။ ဒါဟာအမှန်တကယ်ကျနော်တို့ရန်အသုံးပြုနေစံ '' hoverboard '' ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိဆိုင်ကယ်မှအတော်လေးနည်းနည်းလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပဲ! အဆိုပါ professionalrider နောက်တာယာဆေးလိပ်သောက်အကဲခတ်ပြုလုပ်သူတစ်ဦး Scooter အပေါ်င်စိတ်ကူးမှလောကီပါပဲ။
ဒါဟာသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအလျင်, ဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အတူဆက်ဆံ, ဘရိတ်, အထွတ်အထိပ်, သိုလှောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အာမခံ၏စောငျ့ရှောကျယူအရေးကြီးပါတယ်။ သငျသညျရှေ့အန္တရာယ် hurtling ရှိအံ့သောငှါအဘယ်သူမျှမရုတ်တရက်မှတ်တိုင်များ။ သငျသညျလျှပ်စစ် Scooter ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ, စကိတ်စံချိန်တင်ပေါ်ပထမဦးဆုံးအများဆုံးဖြစ်ဖွယ်ရှိမရှိကြပေ။ ဤသည်အခြားဖြစ်ပါတယ် နှစ်ခုဘီးလျှပ်စစ်မိမိကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်း Scooter ဖြစ်ပြီးပင်ပေါ်မှာရပ်နေနှင့်ပင်ပွဲချင်းပြီးအတွက် 360 ဒီဂရီလှန်နိုင်ပါတယ်။ ဘီးနှစ်ဘီးနှင့်နှစ်ခုကိုအင်ဂျင်အလျင်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးအဝလွန်သို့မဟုတ်အဝလွန်အထူးသဖြင့်လူတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းအမှု၌ဤစေမယ့်အရေးပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။
အချိန် post: ဇန်နဝါရီ-25-2018